ဇန္နဝါရီလ 2018 | တစ်ဦးကရထား Save
လ: ဇန္နဝါရီလ 2018
နေအိမ် > ဇန္နဝါရီလ 2018
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ရထားလမ်းအားဖြင့်ဥရောပတစ်ဝှမ်းခရီးသွားလာအလျင်သွားမပေးကြောင်းတစ်ကာလကြာရှည်အစဉ်အလာဖြစ်ပါတယ် – ရထားအမြန်ဆုံးများမှာ, အများဆုံး Eco- ဖော်ရွေ, တစ်နေရာမှတစ်နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်း. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရထားလက်မှတ်စနစ်ကစည်းရုံးရေးထဲကနာကျင်မှုကိုယူပေမယ့်…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ တိုင်းပြည်နိုင်ငံကနေခရီးသွားလာ, သို့မဟုတ်မြို့မြို့မှ, ရထားကအမှန်တကယ်အံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံနှင့် Voyages ဤသို့ပြုဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်. ဥရောပရထားကိုပုံမှန်အတိုင်းအကြီးအကျယ်ခရီးထွက်အကွာအဝေးအပေါ်အခြေခံထားတယ်, သို့သော်, များစွာသောဥရောပရထားလမ်းကုမ္ပဏီများသည်ယခုအခါပြောင်းရွှေ့လာကြသည်…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ အီတလီမှာမီးရထားခရီးနှစျသိမျ့သို့သော်အချို့အထင်ကြီးအမြင်များကိုသာပူဇော်. သငျသညျခငျြးခငျြးတစျခုအရပျမှခရီးအဖြစ်အီတလီမှာရထားယူပြီး ပတ်သက်. အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာတော်တော်လေးရှုခင်းကိုကြည့်ဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်. အီတလီနိုင်ငံအချို့အစိတ်အပိုင်းများအတွက်,…